अभिनेत्री ऋचा शर्माको आज जन्मदिन, कति वर्ष पुगिन् ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/अभिनेत्री ऋचा शर्माको आज जन्मदिन, कति वर्ष पुगिन् ?
नेपाली चलचित्रकी प्रतिभावान अभिनेत्री ऋचा शर्मा बिहीवार आफ्नो जन्मदिन मनाउँदैछिन् । ३३ वर्षमा प्रवेश गरेकी उनको जन्म २०४४ साल साउन १ गते धनगडीमा भएको थियो । उनको बाल्यकाल कैलाली जिल्लामा नै वितेको थियो । सन् २००७ देखि ग्ल्यामर दुनियाँमा भित्रिएकी उनी नेपाली चलचित्रकी भर्सटायल अभिनेत्रीको रुपमा चिनिन्छिन् ।
गत वर्षको मंसिरमा दिपेक्ष राणासँग घरजम बसाएकी ऋचा सन् २००७ मा मिस नेपाल प्रतियोगिताको उत्कृष्ट दशभित्र परेकी थिइन् । उनले लिड अभिनेत्रीको रुपमा ब्रेक पाएको चलचित्र भने ‘फस्ट लभ’ हो । चलचित्र क्षेत्रमा एक दशकको यात्रा पार गरिसकेकी उनले ‘मेरो लभ स्टोरी’, ‘हाइवे’, ‘लुट’, ‘सुनकेशरी’, ‘भिसा गर्ल’, ‘बाटो मुनिको फूल २’ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन् ।
ऋचा अभिनीत प्रायः चलचित्र बक्सअफिसमा असफल भए पनि उनी हरेक प्रकारका भूमिकामा आफूलाई ढाल्न सिपालु छिन् । चलचित्र ‘को आफ्नो’ मा उनले ग्रामीण भेगको दुःखी महिलाको भूमिका निभाएकी थिइन् । यसमा उनको भूमिका र अभिनयको प्रशंसा भएको थियो । ऋचाको करिअरको सबैभन्दा सम्झनलायक चलचित्रको रुपमा भने ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ लाई लिइन्छ ।